अज्ञात रोगबाट ग्रसित रेनुका गोलेलाई आर्थिक सहयोग : अज्ञात रोगबाट ग्रसित रेनुका गोलेलाई आर्थिक सहयोग :
अज्ञात रोगबाट ग्रसित रेनुका गोलेलाई आर्थिक सहयोग
२६ आश्विन २०७७, सोमबार ११:१९ । काठमाडौं
अज्ञात रोगबाट ग्रसित रेनुका गोलेले आर्थिक सहयोग पाएकी छिन् । बिरामी गोलेले नेपाल प्रबासी तामाङ समाज कतारको पहलमा संकलित ८८ हजार ९७३ रुपैयाँ र जापानमा रहेका टासी इलावा शेर्पाले १० हजार गरि ९८ हजार ९७३ रुपैयाँ सहयोग पाएकी हुन् ।
काठमाडौंको बौद्धस्थित छिमेकी क्याफेमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि आर्थिक सहयोग बिमारी रेनु र उनको परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । असोज २४ गते शनिबार हस्तान्तरण गरेको आर्थिक सहयोगका लागी तामाङ समाज नेपालले समन्वय गरेको थियो ।
त्यसैगरी जापानमा रहेका शेर्पाले भने तामाङ समाज कतारको फेसबूकबाट प्रसारित लाइभ हेरेर सहयोग गरेको हो । ‘ लाइभ हेर्दाहेर्दै मन थाम्न सकेन श्रीमतीलाई फोन गरेर सानै भएनी सहयोग पुर्‍याई दिन अनुरोध गरे ‘ शेर्पाले भने ।
धादिङ खनियाबास गाउँपालिका-५,की बिरामी रेनुको बुबा विनोद गोले, तामाङ समाज कतारका पूर्व केन्द्रिय सदस्य हुन् । बुबा विनोदका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा चेकजाँच तथा उपचार गर्दै आए पनि छोरीको रोग पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । विनोद भन्छन् ‘ छोरी रेनुको नाक, मुख, अँखा र कानबाट रगत बग्ने गर्छ, उनको पीडा बाँड्न मिल्ने भए म सबै लिन्थे ।’
१. अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा पुनः स्थापित हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
२. संगीतमा जमेका सन्जोक योन्जन
३. अनिता लामाका तीन कविता
४. इन्स्टाग्रामबाट अबदेखि चार घण्टा लाइभ गर्न मिल्ने
५. लोकतान्त्रिक तामाङ संघ सर्लाहीको नयाँ कमिटी चयन
६. रात्रिकालीन खेल हेर्ने विराटनगरवासीको चाहना पूरा हुँदै